कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न गोदरेजको ‘मिस्टर म्याजिक, स्वच्छतामा सुरक्षा’ अभियान - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ कर्पोरेट ∕ कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न गोदरेजको ‘मिस्टर म्याजिक, स्वच्छतामा सुरक्षा’ अभियान
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७८ जेठ १३ गते, १०:०८ मा प्रकाशित
काठमाडौं–नेपालमा यतिबेला कोभिड–१९ को दोस्रो लहर तीब्र रुपमा फैलिरहेको छ । कोभिड–१९ संक्रमण फैलावट रोक्नका लागि गोदरेजले ‘मिस्टर म्याजिक, स्वच्छतामा सुरक्षा’ अभियान सुरु गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको समयमा हात धुने महत्वलाई ध्यानमा राख्दैं मान्छेहरुलाई हात धुन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सो अभियान सुरु गरेको बताइएको छ । यस अभियानअन्तर्गत गोदरेजले भाटभटेनीलगायत काठमाडौंका विभिन्न प्रमुख अस्पतालहरुमा हात धुने अभियान सुरु गरेको हो ।
अभियानअन्तर्गत राजधानीको १० वटा अस्पतालहरुमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, अल्का अस्पताल, ओम हस्पिटल र केएमसी अस्पतालमा यो महिना र ग्रिन सिटी हस्पिटल, मनमोहन मेमोरियल हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, सुमेरु हस्पिटल र नेपाल मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटलमा अर्को महिनादेखि यो अभियान सुरु हुनेछ ।
यी हस्पिटलहरुमा ‘मिस्टर म्याजिक’को निःशुल्क हात धुने स्टलको व्यव्स्था गरिएको छ ।
प्रत्येक स्टलमा गोदरेजको उत्पादन ‘मिस्टर म्याजिक ह्यान्डवास’ र पानीको व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिस्टर म्याजिक पाउडर ह्यान्डवास’ हो जुन पानीको सम्पर्कमा आएपछि लिक्विड बन्छ । एउटा बोटलमा २०० मि.लि. पानी र ‘मिस्टर म्याजिक पाउडर’ राखेर सजिलै ह्यान्डवास बनाउन सकिनेछ । यसको रिफिल पनि बजारमा सजिलै उपलब्ध छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्ने प्रमुख उपाय पटक–पटक हात धुनु हो । गोदरेजको यो अभियानले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन रोक्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । कम्पनीले यो आफूहरुको सानो प्रयास भएको जनाएको छ । स्वच्छताका लागि गोदरेजका विभिन्न उत्पादनहरु प्रभावकारी र विश्वसनीय रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।